Warbixinta NFT: 2021 waa sanad kobac wayn - Cazoo
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Warbixinta NFT: 2021 waa sanad kobac weyn
NFT Warbixinta rubuc-biloodlaha ah 2022
Tag: ethereum, lavalabs, Meebit, NFT
Waxaan akhrinay warbixintii ugu dambeysay ee Nonfungible, oo loo hibeeyey NFT adduunka.
Miyaan ku kalsoonahay wax aan la aqbali karin? yaan ahay Waxaa la aasaasay 2018 markii hore si ay ula socoto macaamilada dhabta ah ee Decentraland, shirkadu waxay horumarisay oo maanta waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee nidaamka deegaanka ee Token Aan-Fungible sida mid ka mid ah xogta ugu kalsoon iyo tixraacyada falanqaynta ee suuqa NFT.
Waxay la socdaan macaamilada hantida baahsan ee waqtiga dhabta ah ee blockchain Ethereum waxayna bixiyaan qalab si ay u caawiyaan xamaasad NFT, nibiriyada iyo xirfadlayaasha kormeero horumarinta suuqyada NFT.
Warbixintu waa bilaash oo waad soo dejisan kartaa cinwaankan. Xogtu been ma sheegto. Warbixintooda Q2 waxay eegaysaa isbeddellada Token ee aanFungible ee silsiladda Ethereum.
Intii lagu jiray rubuc-qarnigan, warshadaha NFT waxay la kulmeen firfircooni aad u weyn iyadoo isticmaaleyaal cusub ay soo galeen bulshada NFT markii ugu horreysay. Saddexdii bilood ee la soo dhaafay, waxaan aragnay warbaahinta caadiga ah oo NFT-yada dul saaraysa meel sare, taasoo siinaya warshadaha soo-bandhig heersare ah, laakiin sidoo kale dhiirigelinaysa qulqulka khad, dhalista farshaxanno iyo mashruucyo cusub.
Waxaan dhihi karnaa dhammaan nalalka taraafikku waa cagaar.
Marka la barbardhigo sannadkii hore ama rubuci hore, doolar badan ayaa la kala iibsadaa, tirada iibsadaha iyo iibiyeyaasha ayaa kordhay, iyo tirada boorsooyinka firfircoon ee toddobaadlaha ah ayaa kordhay. Isbeddelkani waa qayb ka mid ah kobaca xooggan ee labada NFT iyo warshadaha cryptocurrency ilaa Sebtembar 2020.
Inkasta oo mugga USD uu ka hooseeyo bilowgii rubuci, mugga iibka ayaa arkay koror xooggan. Qaybta alaabta la ururiyo ayaa si weyn u haysa suuqa rubuc-tan. Qarixii mugga USD ee bishii Maajo waxaa inta badan sabab u ahaa bilawga mashruuca Meebits ee larvalabs.
Waaxyaha oo dhan, waaxda adeegyadu way horumartay saddexdii bilood ee la soo dhaafay. Maaddaama kiisaska isticmaalka NFT aysan ahayn mid baahsan, waxay si taxadar leh u tixgeliyaan in calaamadani ay noqon karto isbeddel.
Maqaalka horeBinance NFT Suuqa: Uruurinta Andy Warhol, Salvador Dalì
Maqaalka xigtaNFT: Tilmaamaha Dhameystiran ee Helitaanka 100x Xiga!
Hindiya waxay u dhaqaaqi kartaa inay u kala soocdo Bitcoin qayb hantiyeed